Archdiocese of Mandalay blog: October 2011
လူ့ဘ၀ . . . ၌
ဖြူစင် နှလုံးစဉ် ကျင့်သုံးလဲ
အပြုံးမပန်တဲ့ . . . လမ်း
Posted by သိုးထိန်းအသံ at 2:11 AM
လူစည်းကားသော လမ်းမကြီးတစ်ခု၏ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံတစ်ခုပေါ် လူငယ်လေးတစ်ဦး အိတ်ကလေးတစ်လုံး လွယ် ပြီး တက်သွားပါသည်။ လိပ်စာအတိုင်း တံခါး ခေါက်လိုက်သောအခါ အသက်ခြောက်ဆယ် အရွယ် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးမှ တံခါးလာဖွင့် ပေးပါသည်။ သူမက လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပြီး လူငယ်လေးကို ကော်ဖီပူပူ တစ်ခွက်ဖျော်တိုက်ရင်း ထိုင်ခိုင်း လိုက်ပါသည်။ ထိုလူငယ်လေးသည် တီဗွီပြင်သော သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးကြီ၏ ဖုန်းဆက်ခေါ်ခြင်းကြောင့် တီဗွီပြင်ရန် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ရာသီ ဥတုအကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးအကြောင်း၊ အနည်းငယ်ပြောဆိုကြ ပြီးနောက် ထိုလူငယ်မှ တီဗွီပြင်ရန်ပြောသော အခါ အမျိုးသမီးကြီးမှ မျက်ရည်များ ကျဆင်းလာပြီး သူမ၏ တီဗွီ မပျက်ပါကြောင်း သူမ၌ စကားပြောဆိုရန် အဖော်တစ်ယောက်မှ မရှိသောကြောင့် ယ္ခုကဲ့သို့ ဖုန်းဆက်ခေါ်မိကြောင်း ဟုပြောပြပါသည်။ တီဗွီပြင်ခ အစား စကားပြောခ တစ်နာရီစာ ပေးမည်ဟုပြောပြပါသည်။ လူငယ်လေးလည်း စိတ်မကောင်းကြီး စွာဖြစ်သွား ပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ လမ်းမပေါ် သွားလာနေရင်း လူအများ ကြီးကြားထဲ ဈေးဝယ်နေရင်း ကျောင်းသွားရင်း၊ ရုပ်ရှင်ရုံထ၊ဲ တစ်ယောက်ထဲ ရုပ်ရှင် ကြည့်နေရင်း အထီးကျန်သော ခံစားချက်ကို တစ်ခါတစ်ရံ ခံစားကြရ မည်ဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေစရာ များပြားလှသည့် ဤခေတ်ကြီးထဲတွင် အဘယ်ကြောင့် ဤမျှ အထီးကျန် ခံစားနေကြ ရသနည်း။ ဆန်းစစ်ဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရား ကျောင်း နေ့စဉ် တက်နေသူများ၊ သူတော်စင် ဘ၀မှ ပုဂ္ဂိုလ်များစွာလည်း ဤသို့ အထီးကျန်ခြင်းကို ခံစားနေရသူမြောက်မြားစွာ ရှိပါသည်။ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ကျောင်းတက်နေသော ကျောင်းသား လူငယ်များ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့သွား ရောက် လုပ်ကိုင်နေကြသော လူငယ်၊ လူကြီး အားလုံး၌ ဤခံစားချက်များ တူညီစွာ ရှိကြပါသည်။ အချို့သူများ ဘုရားကျောင်းထဲ ငိုကြေွး နေသူများကိုပင် တွေ့ကြုံဖူးပါသည်။ အဘယ် ကြောင့် ဆိုသော် မိဝေးဖဝေးနေရချိန်တွင်း "ကိုယ့်ကို မည်သူမျှ မသိသော" ဘုရားကျောင်း အသစ်၌ တက်ရသောကြောင့်ဟု သိရပါသည်။ ဓမ္မတေးသီဆိုရင်း မိဘကိုလွမ်းနေသူ၊ ချစ်ခင်ခဲ့ရသူများကို သတိရနေကြသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
သို့သော် အထီးကျန်ဖြစ်နေခြင်း၌ပင် အပြုသဘောဆောင်ခြင်းကိုတွေ့မြင် ရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သခင်ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ခံစားနေကြရချိန်၌ ကျွန်ုပ်တို့ဘ၀များကို ပိုမိုစောင့်ရှောက်နေခြင်းကို ခံစားတွေ့ရှိလာ ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒုက္ခရောက်လေ ဘုရားနှင့် နီးလေဖြစ်လာ တတ်ပါသည်။ သင့်ရှေ့ မှာ ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တိုင်ကြွ၍ သင်နှင့် အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်။ သင့်ကို စွန့်ပစ်မထားပါ။ မစိုးရိမ်နှင့်။ စိတ်မပျက်နှင့်ဟု အစ္စရေး လူမျိုးတို့အား ဘုရားရှင်မှ ကတိ ထားတော်မူခဲ့ပါသည်။ (ဟေဗြဲ-၁၃း၅) ဤကတိတော်ကို ယုံကြည် ကြရပါမည်။ လူအများပြည့်ကြပ်နေ သော အခန်းတွင်း၊ မီးရထား (သို့) လေယာဉ်ပျံ စီးနေရင်း လူအများကြားထဲ၌ အထီးကျန် ဘ၀ကို ခံစားနေကြရသူ များစွာရှိပါသည်။ အိမ် ထောင်သည်ဘ၀၊ လင်မယား၊ မိသားစုအတွင်း၌ အထီးကျန်နေကြသူများ ကိုတွေ့ကြရသည်။ မိမိနေထိုင် သွားလာရင်းနှီးနေကျ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အဝေးသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြရသောအခါ အထီးကျန် ဘ၀ကို ခံစားကြရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်မှ အနားယူပြီး အငြိမ်းစား ဘ၀၌ရောက်နေကြ သူများသည်လည်း ဤဝေဒနာကို ခံစားကြရပေသည်။ တစ်ဦးတည်းနေထိုင်ပြီး အထီးကျန်ဘ၀ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားကြသူများသည် ယင်းဒါဏ်ကို မခံစားနိုင်ကြဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ် သေ အဆုံးစီရင်သွားတတ် ကြသည်။ အထီးကျန် ခြင်းကြောင့် စိတ်ဝေဒနာပါ ခံစားသွားရခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူတစ်ယောက်သည် ပစ်ပယ်ခံရခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းများကြောင့်လည်း အထီးကျန်ခြင်းဖြစ် ကြရပါသည်။ ရောဂါ ဝေဒနာပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရပြီး သေဆုံးရ တော့မည်ကို သိနေသော လူမမာများသည် အဆိုးဝါးဆုံး အထီး ကျန်ဘ၀ကို ခံစားနေရသူများဖြစ်ပါသည်။ အကျဉ်းထောင်ထဲ၌ သေဒါဏ် ခံစားရသူများနှင့် အဖြစ်ခြင်း တူညီနေပါသည်။ ခင်မင်သူ၊ ချစ်ခင်ရသူတို့၏ အားပေးမှု၊ ဘုရားရှင်ထံ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပ်နှံထားသူတို့သာ သူတို့ ဘ၀ကို ကိုယ်တိုင်ဖေးမ ကူညီနိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ့်ဘ၀ကို ဘုရားရှင်ထံ အပ်နှံထားသူတို့သည် ဘ၀၏ မည်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေသော်လည်း အထီးကျန်ခြင်း မဖြစ်ကြပါ။ မိတ်ဆွေကောင်းများရရှိရန် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မိတ်ဆွေကောင်း တစ်ဦးဖြစ် ရပေမည်။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းကောင်းပေါများသူ၌ အထီးကျန်ဖို့ အချိန် မရှိတော့ပေ။ ဘုရားကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သော တာဝန်များ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် လှုပ်ရှားနေသူတို့သည် တစ်ကိုယ်တည်း စဉ်စားနေချိန် မရှိပေ။ စိတ်ရင်းစေတနာ ကောင်းသူများ၌ အထီးကျန်ဝေဒနာ မရှိကြပေ။ လူသားတို့၏ အထီးကျန်ဆန်မှု အများဆုံးသော စကားလုံးများမှာ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် သခင်ယေဇူး၏နှုတ်ဖျားမှ ထွက်ပေါ် ခဲ့ပါသည်။ "ကျွန်ုပ်၏ ဘုရား အကျွန်ုပ်၏ ဘုရား အဘယ် ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း" ဟူသော ကြေွးေကြာ်တော်မူခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထီးကျန်ခြင်း မဖြစ်ကြရ စေရန် ဘုရားရှင်၏ သမ္မာကျမ်းစာကို နေ့စဉ် အနည်းဆုံး တစ်ပိုဒ်နှစ်ပိုဒ် ဖတ်ကြရပါမည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျမ်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားရှင်ထံမှ ချစ်ခင်သောကြောင့် လူတိုင်းကိုပေးထားသောမေတ္တာစာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် ခွန်အားရစေသည်။ ကျမ်းစာ ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဘုရားရှင်၏ အနီးနားသို့ရောက် သွားစေရန် ဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်းတို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းချီး မင်္ဂလာများစွာ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘ၀များ သည် လုံးဝ အထီးမကျန်ကြတော့ပေ။
Posted by သိုးထိန်းအသံ at 7:38 PM
တစ်ခါက အိန္ဒိယပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး မဟာဓမ္မဂန္ဒီဟာ သူ့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းနေ ထိုင်ရာ အာဖရိကနိုင်ငံကို အလည်အပတ် သွားခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းနေအိမ်ရောက်သွားတဲ့ အချိန် မှာတော့နေ၀င်ပြီး စဖြစ်လို့ ညနေစောင်းနေပါပြီ။ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်မိသားစုဖြစ်တဲ့ အလျောက် အိမ်ရှေ့က မယ်တော်ဂူလေးရှေ့မှာ စိတ်ပုတီးစိပ် ဆုတောင်း ၀တ်ပြုနေကြတဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းမိသားစုကို ခြံထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ လှမ်းမြင်လိုက် ရတယ်။
ဂန္ဒီ၀င်အလာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ သားငယ်လေးက သူ့အဖေကို လှမ်း
တို့ပြောလိုက် ပါတယ်။ အဖေဖြစ်သူလည်း သူတို့ရဲ့ ဆုတောင်းဝတ်ပြုမှုကို ရပ်ဆိုင်းပြီး ဂန္ဒီကို ဆီးကြို လိုက်ပါတယ်။ ဆက်ဆိုဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ စိတ်ပုတီးနှစ်ဆယ်ကိုလည်း နောက်မှပဲ ဆက်ဆိုဖို့ သဘောတူ ထားကြတယ်။ ဒါကို ရိပ်မိတဲ့ ဂန္ဒီကြီးက "သူငယ်ချင်း မင်းတို့ ဆုတောင်းစရာတွေ ပြီးအောင်တောင်းဆို လိုက်ကြအုံး ... ငါ့ကို ဘာမှ အားနာမနေနဲ့ ... မင်းတို့က ငါ့ထက် အဆပေါင်း များစွာ ကြီးမြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဂုဏ်ပြု နေကြတာပဲ။ အရေးကြီးဆုံးသော အရာကို ဦးစားပေး ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်" လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်း မိသားစုမှာ ဂန္ဒီရဲ့ စကားကြောင့် အထူးအဆန်းဖြစ်မိ ကြသလို အံ့သြလည်း အံ့သြမိကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူတို့ မိသားစု အားလုံး မယ်တော်ဂူရှေ့ ဒူးထောက်မေတ္တာ ဆက်ဆိုကြပါတော့တယ်။
အခုခေတ် ကျွန်တော်တို့ ကက်သလစ် ဘာသာဝင်များအတွက် ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် မဟုတ်တဲ့ မဟာဓမ္မဂန္ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ စကားဟာ အားကျစရာ၊ အတုယူစရာများဖြစ်နေပြီလားလို့ ကျွန်တော်တွေး ကြည့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အရာရာထက် ဘုရားသခင်ကို ဦးစားပေးဖို့၊ အလေး အမြတ်ထား ဦးထိပ်ထားဖို့ သတိမေ့ပျောက် တတ်ကြလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီး ဆုံးသော အရာဟာ ဘုရားသခင် အစား အခြားအရာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။နေ့စဉ် လုပ်ရမယ့် တာဝန် ၀တ္တရားတွေ များလွန်းလို့ ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ့်ဘ၀ထဲ ၀င်ရောက်လာဖို့ နေရာ မပေးကြဘူး။ ဘုရားသခင်ကို ဒုတိယ နေရာမှာပဲ ထားကြတယ်။ ပဌါနပြုသင့်တဲ့ အရာကို သာမညအဖြစ် ထားရှိပြီး သာမညဖြစ် နေတဲ့လောကီရေးရာထွေရာလေးပါးတွေကို ပဌါနအဖြစ် မှတ်ယူထားရှိပြီး တန်းဖိုးထား အလေးပေး ကြတော့တယ်။
ကျမ်းစာထဲက အကြီးမြတ်ဆုံး ပညတ်နှစ်ခုထဲက ပထမပညတ် ဖြစ်တဲ့ "သင်၏ အရှင် ထာဝရဘုရား သခင်ကို သင်၏ စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့၊ စိတ်အားရှိသမျှ၊ ဥာဏ်စွမ်း ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့" (မာတေဦး ၂၂း၁၇) ဆိုတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်ကို မသိမသာလေးနှင့် သိသိသာသာမေ့လျော့နေ မိကြပါလိမ့်မယ်။ သင်ရဲ့ ဦးထိပ်ထားရဆုံးသော အရာ၊ အရေးကြီး သော အရာဟာ ဘုရားသခင်သာဖြစ် သင့်ပါတယ်။ သတိတရား အမြဲထားပြီး ဆင်ခြင် တတ်ကြပါစို့။
Posted by သိုးထိန်းအသံ at 6:19 AM
သင်၏ ယုံကြည်ခြင်းကို အစာကျွေးပါ။ သံသယများ ကင်းပျောက်ပါလိမ့်မည်။
၁။ သင် ဝမ်းနည်းသော အခါ (ယောဟန် ၁၄)
၂။ အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံစား ရပါက (ဆာလံ ၅၁)
၃။ အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင် ရပါက (ဆာလံ ၉၁)
၄။ ကျရံးသည်ဟု ခံစား ရပါက (ဆာလံ ၂၇)
၅။ ဘုရားရှင်နှင့်ဝေးသည်ဟု ခံစား ရပါက (ဆာလံ ၁၃၉)
၆။ သင်၏ ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားရန် လိုအပ်ပါက (ဟေဗြဲ ၁၁)
၇။ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ပြီး၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ခံစားရပါက (ဆာ ၂၃)
၈။ သင်၌ စိုးရိမ် ပူပန်စိတ် ရှိပါက (မဿဲ ၈း၁၉-၃၄)
၉။ သင်သည် နာကျင်စွာဝေဖန် အပြစ်ရှာ ခံရသောအခါ (၁ကော၁၃)
၁၀။ သင်၏ ဘာသာတရားကို ယုံမှား သံသယ ရှိလာပါက(၂ကော ၅း၁၅-၁၈)
၁၁။ ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟများ၏ စွန့်ပစ်ခြင်း ခံရသည်ဟု ခံစားရပါက (ရော ၈း၃၁-၃၉)
၁၂။ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရှာဖွေသော အခါ (မဿဲ ၁၁း၂၅-၃၀)
၁၃။ လောကကြီးဟာ ဘုရားထက်ကြီးသည်ဟု ခံစားရပါက(ဆာလံ ၉၀)
၁၄။ သင်သည် ခရစ်တော်ကို အာမခံချက်ကဲ့သို့ လိုအပ်ပါက(ရောမ ၈း၁-၃၀)
၁၅။ သင်သည် အိမ်နှင့်ဝေးကွာသော ခရီးတစ်ခုသို့ ထွက်ခွာသွားရလျှင် (ဆာလံ ၁၂၁)
၁၆။ သင့်အတွက် သင် ဆုတောင်းနေပါလျှင် (ဆာလံ ၈၇)
၁၇။ သင်၏ လုပ်ငန်းအတွက် ခွန်အားပေးမှု့ လိုအပ်ပါလျှင်(ယောရှု ၁)
၁၈။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့များ သင်၏ အတွေး၌နေရာယူနေပါက (မာကု ၁၀း၁၇-၃၁)
၁၉။ စိတ်ဓါတ် ကျနေပါက (ဆာလံ ၂၇)
၂၀။ သင်၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း လက်ကျန်မရှိပါက (ဆာလံ ၃၇)
၂၁။ အယုံအကြည် ကင်းမဲ့ခြင်း ခံစားနေရပါက (၁ကော ၁၃)
၂၂။ မိတ်ဆွေများ၏နွေးထွေးမှု့ လျော့နည်းနေပါက (ယော ၁၅)
၂၃။ မျှော်လင့်ချက် ဆုံးရံးနေပါက (ဆာလံ ၁၂၆)
၂၄။ လောကကြီးက သင့်ကိုကြဉ်သည်ဟု ခံစားလျှင် (ဆာ ၁၉)
၂၅။ အသီးသီးသော အသက်တာ လိုချင်လျှင် (ယော ၁၅)
၂၆။ ပေါလု၏ လျှို့ဝှက် ဝမ်းမြောက်ခြင်း (ကော ၃း၁၂-၁၇)
၂၇။ ကြီးမားသော အခွင့်အခါကောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိလျှင် (ဟေရှာ၅၅)
၂၈။ အခြားသူများနှင့် မိဿဟာယဖွဲ့လျှင် (ရော ၁၂) အလှည့်ကျ ဖုန်းခေါ်ရန်မှာ -
ကြောက်ရွံ့ခြင်း ရှိလျှင် - (ဆာလံ ၄၇)
လုံခြံမှု့ရှိရန် - (ဆာလံ ၁၂၁း၃)
စိတ်ချ မှု့ရှိရန် - (မာကု ၈း၃၅)
သံသယများ ကင်းပျောက်စေရန် - (ဆာလံ ၁၄၅း၁၈)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:32 AM
ကျွန်တော်တို့သည် ဤလောကကြီးတွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်း လူအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်ဆံ ပေါင်းသင်းကြပါသည်။ စကားပုံတစ်ခုပင် ရှိ သည်။ "လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ" တဲ့။ ကျွန်တော်တို့သည် လူသားများဖြစ်သောကြောင့် လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်း နေထိုင်ကြရသည်။ ထိုကြောင့်လည်း ရုံး၊ ဌာန၊ ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ အသင်းအဖွဲ့၊ အိမ်၊ ဘုရားကျောင်း၊ ဘုန်းကြီး ကျောင်းစသည့် လူ့အဖွဲအစည်းအတွင်း ကျင် လည်နေထိုင်ကြရသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းတွင် ကောင်းသည့်အရာများ ရှိသလို၊ မကောင်းသည့် အရာများလည်း ရှိကြသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဤလူ့ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံသည့် အခါ ပြေလည်သည့်ဆက်ဆံရေး ရှိသလို မကောင်းသည့် အရာများလည်း ရှိကြသည်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဤလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်ကြပါ။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့သည် လူသားများပင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤလူ့ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် ဆက်ဆံကြသည့် အခါ လူအမျိုးမျိုး ပါဝင်နေသောကြောင့် ပြေလည်သည့် ဆက်ဆံရေးများ ၊ မပြေလည်သည့် ဆက်ဆံ ရေးများကို အနည်းနှင့်အများ ကြုံတွေ့ကြရမည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြုံတွေ့ကြရသည့် အခါ သည်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟု ဆိုရာတွင် လူပေါင်းစုံ၊ စရိုက်ပေါင်းစုံ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း စသည့် လူမျိုးပေါင်းစုံ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထိုကဲ့သို့ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဖွဲ့စည်းထားမှလည်း လူ့အဖွဲ့ အစည်းသည် လှပမည်ဖြစ်သည်။ ပန်းဥယျာဉ် ကြီးကို ပဲကြည့်ပါ။ အဖြူရောင် ပန်းတစ်မျိုး တည်းသာပွင့်နေသော ဥယျာဉ်ကြီးဖြစ်လျှင် လုံးဝကြည့်ကောင်းသော ပန်းဥယျာဉ်ဖြစ်မည် မဟုတ်ပါ။ရောင်စုံ ဖူးပွင့်နေသော ပန်းဥယျာဉ် ကြီးဖြစ်မှသာ အလွန်လှပကြည့်ကောင်းသော ဥယျာဉ်ကြီးဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ် ဖတ်ရှုရာတွင်လည်း ရသတစ်ခုတည်း ပါဝင် သောဝတ္ထုကို ဖတ်ရလျှင် လုံးဝ ဆွဲဆောင်မှု မရှိ၊ ဖတ်ရှု၍ မကောင်းသော ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေ မည်ဖြစ်သည်။ ရသမျိုးစုံပါဝင်သော ၀တ္ထုက ပင်လူတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော နာမည်ကျော် ၀တ္ထုကောင်း တစ်ပုဒ်ဖြစ်မည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လည်း လူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင် သော အဖွဲ့အစည်းက လူတို့၏စစ်မှန်သော ဆက်ဆံရေးကို ပေါ်ပေါက်နိုင်စေ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ လှပသော ပန်းဥယျာဉ်ကြီး ကဲ့သို့ပင် လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ဖြစ်သောကြောင့် ဆက်ဆံရေး မပြေလည်မှုများ ရှိတတ်သည်။ ဤဆက်ဆံရေး မပြေလည်မှုများကို ကျွန်တော်တို့သည် သည်းခံခြင်းအားဖြင့် နေထိုင်ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံကြရမည်။ သည်းခံခြင်းသည် မသည်းခံ နိုင်သောအရာဖြစ်မှသာလျှင် ကျွန်တော်တို့သည် ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုတွင် ဘယ်လောက် သည်းခံနိုင်တယ်၊ မသည်းခံနိုင်ဘူးလဲ ဆိုတာ အဖြေထွက် လာမည်။ သည်းခံခြင်းသည် ခံရစဉ်အခါတွင် ဘယ်လိုမှသည်းမခံနိုင်ပါ။ ဒေါသထွက်ချင်သည်။ လက်တုံ့ပြန်ချင်သည်။ စိတ်ထဲတွင် မခံမရပ်နိုင် နှင့် စိတ်မရှည်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သို့ရာတွင် သည်းမခံနိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ သည်းခံကြည့်လိုက်ပါ။ သည်းခံလိုက်သည့် အချိန်မှာမူ ခံရခက်သည်။ သို့သော်လည်း သည်းခံ ပြီးချိန်တွင် သည်းခံလိုက်သည့် အကျိုးကျေးဇူးကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ သည်းခံလိုက်ခြင်း အားဖြင့် တစ်ဖက်လူရော၊ သည်းခံလိုက်သည့် လူပါကောင်းမွန်သော အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ဘာနှင့်တူသလဲဆိုရင် လှေကား တစ်ခုကိုတက်သည်နှင့် တူသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် လှေကားကို တက်သည့်အခါတွင် သတိမထားမိပါက တစ်ထစ်ချင်း တက်သည့်အခါ သိပ်ပြီး မသိသာပါ။ တစ်ထစ်ချင်းတက်ပြီး ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်သည့်အခါမှ လှေကားထစ်တွေ အများကြီး ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပါလား ဆိုတာ သိမြင်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည်းခံလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရော တစ်ဖက်လူပါဝမ်းမြောက်ခြင်း ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ မသည်းခံလျှင် အမုန်းများသာ ဝေမျှခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤလောကကြီးသည် အမုန်းများ မျှဝေခံစားရဖို့ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း မဟုတ်။ ၀မ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက် သာယာခြင်းများကိုသာ မျှဝေ ခံစားဖို့ဖြစ်သည်။ သည်းခံခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့အား ဖြင့် လုပ်ယူ၍ မရ။ ကျွန်တော်တို့ အားဖြင့်ဆိုလျှင် သည်းခံခြင်း မဟုတ်၊ ကြိတ်ခံခြင်းသာ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ သည်းခံခြင်းသည် ဘုရားက လုပ်ပေးမှသာ လျှင်ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားက ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားမှာ နေရာယူပြီး သည်းခံခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းတွေ ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကျွန်တော်တို့အားဖြင့် သူတစ်ပါး၊ လူအများကို ၀မ်းမြောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သခင် ယေဇူး ခရစ်တော်ကို ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားမှာ ယုံကြည် လက်ခံလိုက်တဲ့အခါ အဲဒီအရာ တွေဟာ ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ် လာပါတယ်။ ဘုရားက ကျွန်တော်တို့ မပါဘဲ ဘာမှမလုပ်ချင်သလို၊ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဘုရားမပါဘဲ ဘယ်အရာတစ်ခုကိုမျှ လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ရှင်ပေတရူးက သခင်ယေဇူးကို သူတစ်ပါးအား ဘယ်နှစ်ကြိမ်၊ ဘယ်နှစ်ခါ ခွင့်လွှတ်ရမလဲလို့ မေးတဲ့အခါ အကြိမ်ခုနှစ်ဆယ် ခုနှစ်လီ ခွင့်လွှတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ သခင်ယေဇူးက သူတစ်ပါး ကိုယ့်ပါးတစ်ဖက်ကို ပုတ်လျှင် နောက် ပါးတစ်ဖက်ကို ပြန်လှည့်ပေးပါလို့ပြော ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံး အတွက် လက်ဝါးကားတိုင်မှာ သခင်ယေဇူးပြုခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးအကြီးမားဆုံး လက္ခဏာက ခွင့်လွှတ် ခြင်းပါပဲ။ သူ့ကို အသက်သေအောင် နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ သူတေ၊ွ အသေသတ်ခဲ့သူတွေကို လက်ဝါးကားတိုင်မှာ "အိုအဖ သူတို့ရဲ့မသိလို့ ပြစ်မှားမိခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ " လို့ ဘုရားသခင်ဆီမှာ ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ အကြီးမားဆုံး လက္ခဏာအားဖြင့် သခင်ယေဇူးဟာ စာတန်ကို အောင်မြင်ပြီး လူသားတွေကို အပြစ်ငရဲမှ ကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ သည်းခံခြင်း အားဖြင့် လောကကြီးကို အလှဆင်ကြပါစို့လို့ ရေးသားတင်ပြ လိုက်ပါတယ်။
Posted by သိုးထိန်းအသံ at 3:12 AM